Robert Mugabe - Photos and News
Movement for Democratic Change (MDC) party President and Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai addressing a rally in Highfields, Harare, Sunday, May, 19, 2013. Tsvangirai who is set to contest against Zimbabwean President Robert Mugabe later in the year, called on Zimbabweans to register to vote ahead of the watershed elections in the country.
Zimbabwe PM: We are 'new broom' set to win pollsHARARE, Zimbabwe – Zimbabwe's prime minister says he is poised to win the presidency in upcoming elections and return the nation to the world community after years of isolation. Prime Minister Morgan Tsvangirai said Friday his party championed a new cons...Zimbabwe lawmakers approve new draft constitutionHARARE, Zimbabwe – Zimbabwe lawmakers have voted unanimously in the lower house to approve a new draft constitution that will enshrine democratic reforms. All 156 legislators present verbally voted "yes" Thursday. A new constitution was accepted by 95 pe...Zimbabwe youth leader in jail for Mugabe slurHARARE, Zimbabwe – A young political activist who compared Zimbabwe's president to a lame donkey will spend another week in jail, his attorney said Tuesday. Defense lawyer Charles Kwaramba said state prosecutors used a contentious appeal law to stop a co...Zimbabwe's president: New tasks for Africa's spiesHARARE, Zimbabwe – Zimbabwe's president says Africa's intelligence services must prepare for fresh onslaughts by foreigners and the continent's former colonizers to grasp its natural resources. President Robert Mugabe said Monday that Africa's vast reser...Zimbabwe generals: We won't meet prime ministerHARARE, Zimbabwe – Zimbabwe's official media says the nation's generals and police commanders won't meet with the prime minister and other "malcontents" trying to undermine their powers. The state-owned Herald newspaper, controlled by President Robert Mu...
Zimbabwe: Supreme Court to Hear Petition On Election Date On ThursdayA court application compelling President Robert Mugabe to announce the date for elections will be heard as an urgent matter in the Supreme Court this Thursday. This comes after chief Justice Godfrey Chidyausiku threw out Prime Minister Morgan Tsvangirai'...Joice Mujuru 'tipped to succeed Mugabe'2013-05-20 14:03 Cape Town - Zimbabwe's Zanu-PF party is mulling over a special congress at which top vacant positions will be filled and the succession of President Robert Mugabe would be decided, according to a report. Quoting a government official, Th...MDC vows to reverse indigenisation drive2013-05-19 21:34 Harare - Zimbabwe's Prime Minister Morgan Tsvangirai wrapped up his party's post-election plan meeting Sunday vowing to overturn President Robert Mugabe 's controversial indigenisation drive if he wins upcoming general elections. He woun...Lecturer jailed for Mugabe 'donkey' insult2013-05-18 14:01 Harare - A lecturer at a government university in Zimbabwe has been jailed for three months for labelling veteran President Robert Mugabe "a rotten old donkey," in the latest such case, lawyers said on Saturday. Chenjerai Pamhiri, 38, a ...Zimbabwe: Mugabe to Summon Military GeneralsPRESIDENT Robert Mugabe has tacitly agreed to summon service chiefs over their recent inflammatory political statements in which they threw afresh their weight behind Zanu PF, as pressure mounts on him to rein in military commanders ahead of watershed el...